Gịnị bụ Coronavirus? Kedu ihe mgbaàmà Covid-19? Kedu ka m ga-esi chebe gị pụọ na Covid-19? | RayHaber | raillynews
[15 / 05 / 2020] Ọrụ na-aga n'ihu maka Ngwaọrụ MR nke Mbụ	06 Ankara
[15 / 05 / 2020] Ọnwụnwa anụmanụ na-amalite maka Covid-19 Antiserum	06 Ankara
[14 / 05 / 2020] Ọdịda akụrụ na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị na-agwọ Coronavirus	1 America
[14 / 05 / 2020] e-Government 1.000 TL Social Nkwado Ajụjụ! Nsonaazụ ngwa ọdịmma nke Pandemi	06 Ankara
[14 / 05 / 2020] Oku iji nye ndi ulo oru nkwado site na TÜBİTAK	General
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulGịnị bụ Coronavirus? Kedu ihe mgbaàmà Covid-19? Kedu ka m ga-esi chebe gị pụọ na Covid-19?
20 / 03 / 2020 34 Istanbul, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Kedu ihe bụ Coronavirus? Kedu ihe mgbaàmà nke covidna?
Obodo isi obodo Istanbul (IMM) bipụtara faịlụ buru ibu na coronavirus na weebụsaịtị ya. http://www.ibb.istanbul Ndị nleta na adreesị ahụ ga-enwe ihe ọmụma zuru ezu banyere ọrịa ahụ site n'aka popup.
Obodo Obodo isi obodo Istanbul ebipụtala nnukwu faịlụ ozi na weebụsaịtị banyere coronavirus, nke ghọrọ nsogbu zuru ebe niile site na ikpuchi ụwa niile. Bido taa http://www.ibb.istanbul Ndị ọbịa na weebụsaịtị ga-enwe ihe ọmụma zuru oke banyere ọrịa ahụ site na ịpị windo na-emepe. Ederede mmụta na saịtị ahụ bụ nke a:
Coronaviruses (CoV) bụ nnukwu ezinụlọ nke nje na-akpata ọrịa dị iche iche, site na oyi dị mfe ruo na ọrịa ndị ọzọ dị njọ dị ka Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) na Sake Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).
G ISN IS B C COVID-19?
COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke ọnya coronavirus nke ikpeazụ chọpụtara. Ọrịa ọhụrụ na oria a na-amaghị ama tupu ya apụta na Wuhan (China) na Disemba afọ 2019.
N’abalị iri atọ na otu n’ọnwa Disemba afọ 31, forlọ Ọrụ Mba Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Mba China mere ka ndị mmadụ mara banyere ọrịa etiology na-amaghị na Wuhan, China.
Na Jenụwarị 7, 2020, amatala onye ọrụ ahụ dịka coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) nke achọpụtabeghị na mmadụ.
Achọpụtara ya na enwere ike ịchọta ya na ụmụ mmadụ, ụsụ, ezì, nwamba, nkịta, akwara na anụ ọkụkọ (anụ ụlọ na anụ ọhịa).
G AREN THE B THER S SBỌCH OF AGBANWE-EGO-19?
Mgbaàmà ndị a na-ahụkarị na COVID-19 bụ ahụ ọkụ, ọrịa na ụkwara na-ata. Patientsfọdụ ndị ọrịa na-enwekwa ahụ mgbu, imi mkpọchi, imi imi, akpịrị mgbu ma ọ bụ afọ ọsịsa. Ihe mgbaàmà ndị a na-adịkarị nwayọ ma na-ewere nwayọ.
Peoplefọdụ ndị mmadụ enweghị akara ọ bụla n’agbanyeghi na ha bu ọrịa ma nwee ahụike. Imirikiti ndị ọrịa (ihe dị ka 80%) na-agbake na-enweghị mkpa maka ọgwụgwọ ọ bụla. Ihe dị ka otu onye n’ime mmadụ isii ọ bụla bu ọrịa ahụ na -arikarị mgbaàmà siri ike, gụnyere dyspnea.
Ndị agadi na ndị nwere nsogbu ahụ ike ndị ọzọ (Ọbara mgbali elu, nsogbu obi ma ọ bụ ọrịa shuga) yikarịrị ka ha nwere nnukwu mgbaàmà. Ihe dika 2% nke ndị ọrịa na-efu.
Ihe mgbaàmà nkịtị nke ọrịa; Ihe mgbaàmà iku ume bụ ahụ ọkụ, ụkwara, na ọnyụnyụ ọbara. N’ọnọdụ ndị ka njọ, oyi baa (oyi baa), nnukwu iku ume iku ume, akụrụ, na ọbụnadị ọnwụ nwere ike ibilite.
O YIKAR CR 19-EGO-XNUMX NA-EGO?
A na-ebunye ya site na ndị mmadụ nwere nje COVID-19. Enwere ike ibunye ya ọrịa site n’otu onye gaa na mmiri site na mmiri iku ume (irighiri akwara) nke a na-awụ site na imi ma ọ bụ n’ọnụ mgbe mmadụ gaara ụkwara ma ọ bụ ọsụsọ. Enwere ike ịhụ nrịpụta ndị a na ihe ma ọ bụ ihe dị n'akụkụ onye ahụ. Ọ bụrụ na imetụ anya, imi, ma ọ bụ ọnụ gị aka mgbe ịmetụchara ihe ndị a aka ma ọ bụ ihu, ị nwere ike bute COVID-19. A pụkwara ibunye mkpụrụ osisi COVID-19 site na ikuputa mmiri site na onye na-arịa ọrịa ụkwara nta. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji zere onye na-arịa ọrịa mita.
Healthtù Ahụ Ike iswa na-enyocha nyocha na-aga n'ihu banyere otu COVID-19 si agbasa ma ga-aga n'ihu na-akọ nsonaazụ emelitere.
VIRUS PPRS FROMBARA N’AGBATARA-19 BY AIR?
Nnyocha e mere ruo taa na-atụ aro na a pụrụ ibunye nje virus nke na-akpata COVID-19 site na kọntaktị na nsị nke iku ume kama ikuku.
CAN P YOUR G OVLỌ EGO-19 SITE N’ANYA N’AGBANYERE ỌR S?
Ọbara na-ekesa site na ụmụ irighiri akụkụ iku ume, nke na-emetụta ọsịsị nke mmadụ. Oria ibute oria COVID-19 n’aka mmadu n’enweghi oria di obere. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ nwere naanị ihe mgbaàmà dị nfe. Nke a bụ eziokwu bụ na mmalite nke ọrịa. Yabụ, enwere ike ibute COVID-19 dịka ọmụmaatụ, naanị na ịkpọtụrụ onye nwere ụkwara dị nro, mana ahụ adịghị ya. WHO na-enyocha nyocha na-aga n'ihu na iche oge nke ndị na-eche ihu na Covid-19 ma ga-aga n'ihu na-akọ nsonaazụ emelitere.
AKW -KWỌ-19 NA-AKW BYKWAS ST N'STBARA STOOL?
Ihe ọghọm nke ibute oria ọrịa na COVID-19 yiri ka ọ pere mpe. Nchoputa mbu gosiri na oria a nwere ike idi na onodu ufodu, mana oria akaghi agbasa n'uzo a. WHO na-enyocha nyocha na-aga n'ihu banyere otú COVID-19 si agbasa ma ga-aga n'ihu na-ezitere nsonaazụ ọhụrụ. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ihe egwu dị ugbu a, ọ bụ ihe ọzọ ka ịsachara aka gị mgbe ị gachara mposi na tupu i rie nri.
Olee otu m ga-esi chebe ọdịmma onwe m ma kedu etu m ga-esi bute ọrịa a?
Ihe nchebe maka onye ọ bụla: Soro ihe omuma ohuru banyere ntiwaputa COVID-19, nke sitere na webusaiti WHO na mgbasa ozi nke Health. COVID-19 ka na-emetụta ọtụtụ ndị nọ na China, ntiwapụ na-agbasakwa na mba ndị ọzọ. Imirikiti ndị butere ọrịa nwere mgbaama dị mfe ma gbakee, mana ndị ọzọ nwere ike ịnwe ụdị ọrịa ọ ka njọ. Lekọta ahụ ike gị ma chebe ndị ọzọ site na isoro ndụmọdụ ndị dị n'okpuru:
Jiri aka gị mee mmiri gị mgbe niile ma ọ bụ were mmiri mmiri ma ọ bụ ncha na mmiri. n'ihi na; Sachaa mmiri gị ma ọ bụ ncha na mmiri ga - egbu nje ma ọ bụrụ na ịnwere ya.
Zere opekata mpe otu mwepụ maka ndị ọzọ na-ụkwara ma ọ bụ nke ịmịkọrọ ọnụ. n'ihi na; Ọ bụrụ na mmadụ sara ọgwụ ma ọ bụ sụọ ya, ọ na-ewepụta obere ụmụ irighiri mmiri nwere ike ibute nje ahụ. Ọ bụrụ na ị dị ezigbo nso, ị nwere ike iku ume ụmụ irighiri mmiri ndị a na ya mere nje dị na COVID-19 ma ọ bụrụ na ụkwara bụ ebu.
Zere imetụ anya gị, imi na ọnụ gị aka. n'ihi na; Aka metụtara na ọtụtụ ihe dị n’elu ala nwere ike ibute nje. Ọ bụrụ na i metụ anya, imi, ma ọ bụ ọnụ gị aka, nje nwere ike ịbanye n’ahụ gị ma daa ọrịa.
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, nọrọ n'ụlọ. Kpọtụrụ dọkịta bụrụ na ahụ ọkụ, ụkwara na ume ọkụ ọkụ. Soro ntuziaka nke Ministry of Health. n'ihi na; Ministri Ahụike nwere ozi kachasị ọhụrụ gbasara ọnọdụ ụwa na mpaghara gị. Dọkịta ezinụlọ gị nwere ike ibuga gị ọsọ ọsọ na ebe nlekọta ahụike kachasị mma. Na mgbakwunye, ọ ga - echebe gị ma gbochie mgbasa nke nje na ihe ndị ọzọ na-efe efe.
Soro dọkịta gị, ndị isi obodo na ndị ọchịchị mpaghara, ma ọ bụ ndụmọdụ banyere otu esi echebe onwe gị na ndị ọzọ na COVID-19. n'ihi na; Ozi ohuru banyere mgbasa nke COVID-19 na mpaghara gị dị n'aka ndị isi obodo na ndị ọchịchị. Enwere ike ikwupụta ndụmọdụ kacha mma na nchedo site na ha. Soro ihe ohuru na COVID-19.
N'ihe banyere ụkwara ma ọ bụ ịmịchaa, kpuchie ọnụ gị na imi gị n'ime ikpere aka ma ọ bụ akwa aka wee tufuo ya ozugbo. n'ihi na; Mkpụrụ ndụ iku ume na-ebute nje. Site n’iso iwu nke usoro iku ume, ị na - echebe ndị nọ n’akụkụ nje dịka fee, flu ma ọ bụ COVID-19. Gbaa mbọ hụ na ịgbaso iwu nke usoro iku ume yana ndị nọ gị gburugburu na-eme otu ahụ.
Usoro mgbochi maka ndị mmadụ letara mpaghara COVID-19 agbasawo (n'ime ụbọchị 14 gara aga):
Soro ndụmọdụ a enyere n’elu. (Ihe nchebe maka mmadụ niile)
Ọ bụrụ n bidoro na-arịa ọrịa, ọbụlagodi na ị nwere mgbaàmà dị nro dịka isi ọwụwa na imi na-agbapụta, esila n'ụlọ pụọ ruo mgbe ị ga-agbake. n'ihi na; Izere ịkpọtụrụ ndị ọzọ na ịgaghị ụlọ ọrụ ahụike na mpụghị mkpa ga-eme ka ụlọ ọrụ ndị a rụọ ọrụ nke ọma, chebe gị na ndị ọzọ pụọ na ọrịa nje ndị ọzọ na COVID-19.
Chọọ nlekọta ahụike ozugbo n'ihe gbasara ọkụ, ụkwara na mkpụmkpụ ume, n'ihi na ọ nwere ike ibute ọrịa iku ume ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ siri ike. Kpọọ dọkịta gị ma kọọrọ ma ọ bụrụ na ị gara njem na nso nso a ma ọ bụ kpọtụrụ ndị njem. n'ihi na; Ọ bụrụ n’ịkpọọ, dọkịta gị nwere ike ibuga gị ọsọ ọsọ na ngalaba nlekọta ahụike kachasị mma. Ọ ga - echekwa gị ma gbochie mgbasa nke COVID-19 na ọrịa ndị ọzọ.
G ISN IS B POSR POS TOBARA EGO-19?
Ihe ọghọm a dabere na ebe ibi ebe ma ọ bụ na njem gara aga. Ọ dị elu na mpaghara chọpụtara COVID-19 n'ime ihe karịrị otu mmadụ. Ugbu a, 19% nke ikpe COVID-95 na-eme na China, ihe ka ọtụtụ na Hubei n'ógbè. Na ọtụtụ mpaghara ụwa ndị ọzọ, ihe ize ndụ iji COVID-19 dị obere ugbu a, mana ị ga-ekwesịrị ịgbaso ọnọdụ ahụ na mbọ a na-akwadebe na mpaghara gị.
WHO na ndị ọrụ ahụike na China na gburugburu ụwa na-arụ ọrụ iji nyochaa ma na-aza ntiwapụ nke COVID-19.
COVID-19 ò kwesịrị inye m nsogbu?
Ọ bụrụ na ịnọghị na mpaghara COVID-19 gbasaa, ịghabeghị otu n'ime mpaghara ndị a, ma ọ bụ na gị na onye na-arịa ọrịa adịghị nso, ihe egwu nke ịrịa ọrịa dị ala ugbu a. Agbanyeghị, enwere ike izute ya na nghọta na enwere ike imesi ya ike ma ọ bụ nwee nchegbu maka ọnọdụ a. Yabụ, ị kwesịrị ịdabere na ozi kachasị ọhụrụ na data iji chọpụta nsogbu ọ bụla ị na - eche ihu iji wee kpachara anya. Dọkịta ezinụlọ gị na ndị ọrụ MoH nwere ike inye gị ozi ziri ezi gbasara COVID-19 na ọnụnọ ya na mpaghara gị.
Ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara COVID-19 ntiwapụ, ị ga-ewere ihe ize ndụ nke ibute ọrịa. Soro ntuziaka nke ndị isi obodo na nke mpaghara. Ọ bụ ezie na COVID-19 na-akpata naanị obere mgbaàmà na ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-enwe mmetụta ọjọọ. Nke ka njọ, ọrịa ahụ nwere ike igbu mmadụ. Ndị agadi na ndị nwere nsogbu ahụike ọzọ (dịka ọbara mgbali elu, nsogbu obi, ma ọ bụ ọrịa shuga) yiri ka ọ ga-agbakarị ọrịa ahụ. (Ọ bụrụ na ị gara na mpaghara COVID-19 gbasaa (n'ime ụbọchị 14 gara aga), ma ọ bụ ọ bụrụ na gị na ndị bịara nleta, lee Ihe Mgbochi.)
OLEE onye nọ n'oké ọrịa nke ọrịa ahụ?
N’agbanyeghi na anyi kwesiri ighota ihe omuma anyi banyere etu COVID-12 si emetuta ndi mmadu, rue ugbu a, ndi okenye na ndi oria ndi ozo bu oria (dika obara mgbali elu, oria obi ma obu obi obi) kariri ndi ozo.
AK ANRT AHT D EF N'INBARA MGBE Ọ B OR EKWUP OFTA-19?
Mba, ọgwụ nje na-arụ ọrụ naanị maka nje ọrịa, ọ bụghị nje. Ọgwụ nje adịghị arụ ọrụ n'ihi na ọ bụ COVID-19 na-akpata virus. Ekwesighi iji ọgwụ nje mee ihe iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-19.
Ọ BACR V ọgwụ dị irè, ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla maka mkpuchi-19?
Ọ dịbeghị. Ruo ugbu a, enweghi ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ọgwụ mgbochi kpọmkwem maka igbochi ma ọ bụ ịgwọ COVID-19. Agbanyeghị, ndị ọ metụtara metụtara kwesịrị ilezi anya belata ọrịa ndị ahụ. Ekwesịrị ịga ụlọ ọgwụ na-arịa ndị na-arịa ezigbo ọrịa. Ọtụtụ ndị ọrịa na-agbake site na nlekọta nkwado. A na-enyocha ọgwụ mgbochi na enwere ọgwụgwọ ụfọdụ akọwapụtara na ule nyocha. WHO na-ahazi ọgwụ mgbochi na ọgwụ mmepe ọgwụ iji gbochie na ịgwọ COVID-19.
E KWES 19R--XNUMX ỌRAME ỌBARA NA SARS?
Mba, nje na-ahụ maka COVID-19 yana nje na-akpata nnukwu akụkụ iku ume ọrịa (SARS) nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa, mana ha dị iche. SARS na-egbu egbu karịa COVID-19 mana na-efe efe na-efe efe. Onweghị okwu SARS hụrụ n'ụwa niile kemgbe 2003.
Ndị na-enweghị ihe mgbaàmà iku ume dịka ụkwara adịghị mkpa iji kpuchie ihu ọgwụ. WHO na-atụ aro iyi ihe nkpuchi maka ndị ọrịa nwere ọrịa na-enweghị (ụkwara na ahụ ọkụ) na-arịa COVID-19. Yiri ihe nkpuchi dị mkpa maka ndị ọrụ ahụike na ndị na-elekọta ndị ọrịa (n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ nlekọta).
WHO na-atụ aro iji ihe masks ahụike jiri ezi uche mee iji zere imebi ihe ndị bara uru na ihe ize ndụ nke iji ihe masks. A na-atụ aro nkpuchi ahụ naanị ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà iku ume dị ka ụkwara ma ọ bụ imi, ma ọ bụrụ na enyo mgbaàmà dị nro nke COVID-19, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ onye echere na COVID-19. E kwesịrị ịtụle COVID-19 n’ime ndị kwagara ma ọ bụ gaa na mpaghara ebe ekpesala ikpe, yana ndị nọ nso na onye na-arịa ọrịa.
Zọ kachasị mma iji chebe onwe gị na ndị ọzọ na COVID-19 bụ ịsa aka gị ugboro ugboro, jiri mkpuchi ma ọ bụ akwa aka mechie ọnụ gị mgbe ị na-aingụ ma ọ bụ mgbe ọ na -eme, na-eguzo ma ọ dịkarịa ala 1 mita site na onye ọ bụla nke ụkwara ma ọ bụ nke na -eme.
Etu aga-esi tinye, jiri, chekwaa ma chekwaa igwe ahụ?
1. Cheta, naanị ndị ọrụ ahụike, ndị nlekọta, na ndị nwere ọrịa iku ume (fever na ụkwara) kwesịrị iyi ihe nkpuchi.
2. Tupu ị ga-eji ihe nkpuchi, were akwa mmiri ma ọ bụ ncha na mmiri saa aka gị.
3. Lelee na ihe nkpuchi ahụ adọghị adọka.
4. Na-eduzi nkpuchi ahụ n'ụzọ ziri ezi (mpempe ígwè dị warara).
5. Lelee na edobere ihu na-acha uhie uhie nke mkpuchi ahụ.
6. Debe nkpuchi ahụ na ihu gị. Mechie eriri ma ọ bụ ihu siri ike nke nkpuchi iji dabara imi imi.
7. Kpoo ukwu nke ihe nkpuchi ahụ iji kpuchie ọnụ na ihu.
8. Wepu ihe nkpuchi ahụ mgbe ị gachara, wepụ ihe ekike roba n'azụ ntị ka ị na-ebupụ nkpuchi ihu gị na uwe iji zere imetụ akụkụ ọ bụla nke ihe ahụ nwere ike ịbụ mmerụ.
9. Tinye nkpuchi ahụ n'ime ihe mkpofu mechiri emechi ozugbo ejiri ya.
10. Mgbe ịchasịrị ma ọ bụ tufuo nkpuchi ahụ, jiri mmiri hydroalcoptik aka gị ma ọ bụ, ọ bụrụ na emetụtara ya nke ọma, jiri ncha na mmiri.
OLEE OTU OVBỌCH--19 N'GBỌCHG AHG INWE?
Oge nnabata bụ oge n'etiti ọrịa na mmalite nke ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ. Emewere ya ugbua na oge ihe iji mata COVID-19 bu ubochi ato rue ubochi iri na ato, ma ewee ihe dika ubochi ise. A ga-emelite atụmatụ ndị a ka data ọhụrụ na-adị.
PEOPLEM PEOPLEP CANR T TB CR-19BARA-XNUMX SITE N’ANYA NKE ANAMALI?
Coronaviruses bụ nnukwu ezinụlọ nke nje ndị a na-ahụkarị na ụsụ na anụmanụ ndị ọzọ. N'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, nje ndị a na-ebute mmadụ, nke nwere ike ịgbasa ọrịa ahụ. Ya mere, SARS-CoV nwere mmekọrịta na mmepe anya, ebe MERS-CoV na-ebugharị site na otu humps. Emebeghị ka enyocha ihe ndị a nwere ike inweta na COVID-19.
Iji kpuchido onwe gị, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-aga ahịa ahịa anụmanụ, ị ga-ezere ịkpọtụrụ anụmanụ na ebumnuche metụtara anụmanụ ma na-agbaso iwu nchekwa nri mgbe niile. Ekwesịrị iji anụ, mmiri ara ehi na anụ ndị dị na anụ ahụ wee jiri nlezianya zere mmerụ nri a na-achọghị ka esi esi ya, na aga-ezere oriri nke ngwaahịa ma ọ bụ nke anụ oriri.
Anụmanụ anụmanụ m nwere ike ibufe Covid-19?
Ee e, enweghị akaebe na anụ ụlọ ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ dị ka nkịta ma ọ bụ nwamba nwere ike ibute ọrịa ma ọ bụ gbasaa na nje nke nwere COVID-19.
OLEE ogologo oge m ga-eji nọrọ na ọnụnọ nje?
Amabeghị afọ ole nje oria a dị na COVID-19 dị ndụ n’elu ala, mana ọ na-akpa arụ dịka coronaviruse ndị ọzọ. Ihe omumu (na ihe omuma banyere COVID-19) gosiri na coronaviruses nwere ike idi ndu otutu oge rue otutu ubochi. Nke a nwere ike ịdabere na parammita dị iche iche (dịka ụdị elu, ihu igwe ma ọ bụ iru mmiri dị).
Ọ bụrụ na ị na-eche na elu nwere ike butere ya, hichaa ya na onye na-edozi ya mgbe niile iji gbuo nje ahụ ma chebe onwe gị na ndị ọzọ. Jiri mmiri ọgwụ mmiri ma ọ bụ ncha na mmiri saa aka gị. Zere imetụ anya gị, ọnụ gị ma ọ bụ imi gị aka.
Ọ dị mma ịsaa site na ala nke igbe akwụkwọ-19 KA E KWURU?
Mba Enwere obere ihe ize ndụ nke onye ọrịa butere ngwongwo, yana ihe ize ndụ nke COVID-19 na-abanye na ngwugwu ebufegoro, njem ma kpughee ọnọdụ na ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche.
E nwere ihe ndị ị na-agaghị eme?
Achọghị usoro ndị a, anaghị arụ ọrụ megide COVID-19, yana enwere ike ịdị ize ndụ:
Usoro ọgwụgwọ ọdịnala
Ijiri otutu nkpuchi n'otu oge
Iji ọgwụ mgbochi eme ihe maka ọgwụ onwe gị
N'ọnọdụ ọ bụla, iji belata ihe ize ndụ nke ịbawanye njọ nke ọrịa ma ọ bụrụ na ahụ ọkụ, ụkwara na mkpụmkpụ ume, kpọtụrụ dọkịta n'egbughị oge wee gwa ma ị meela njem ọhụụ ọ bụla.
EGO NA-AKPARA AKWOTKWỌ AKW AGKWỌ AKW AGKWỌ AKW AGKWỌ AKW AGKWỌ AKW AGKWỌ AK AGKỌ
WUTA aka gị ugboro ugboro
Ghichaa aka gi mgbe nile na site n'iji ihe na-a alcoholụ mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ jiri ncha na mmiri saa ha. n'ihi na; Iji ncha na mmiri sachaa aka gị ma ọ bụ iji ọgwụ na-egbu egbu egbu egbu gị na-egbu nje ndị nwere ike idozi n’aka gị.
Chekwaa OCGBỌ ỌROC
Zere dịkarịa ala mita 1 onye ọ bụla nke na-arịa ụkwara ma ọ bụ nke ịmịara. n'ihi na; Ọ bụrụ na mmadụ sara ọgwụ ma ọ bụ sọọsụ ya, ọ na-awụpụ ntakịrị mmiri mmiri nke nwere ike ibute nje site na imi ya ma ọ bụ n'ọnụ ya. Y’oburu na idi nso, ma oburu na onye na ako ya nwere oria, inwere ike kuru ume mmiri, tinyere oria COVID 19.
Gbanyụọ anya mmiri, NOSE NA ANY.
n'ihi na; Aka metu otutu ihe di elu ma obu oria. Mgbe ahụ, aka gị nwere ike ibufe nje ahụ n’anya gị, imi gị, ma ọ bụ n’ọnụ gị. Site n’ebe ahụ, nje nwere ike ịgbasa ahụ gị niile wee mee ka ị rịa ọrịa.
HYGIENE ANYP NA-EGO
Gbaa mbọ hụ na gị na ndị gbara gị gburugburu na-eme ezigbo mmebi ume. Nke a putara ikpuchi ukwu gi na imi gi n’elu ukwu ma obu imiaka gi ipupu mgbe i kuo ume ma obu izere. Wepu ozugbo anụ ahụ ejiri. n'ihi na; Ọkụ na-ebute nje. Site na itinye ezigbo ume iku ume, ị na-echebe ndị nọ gị nso nje virus dịka oyi, flu na COVID-19.
Ọ B IFR YOU na HAVEB DR D IKP INTA N'IWU, OUKP ANDTA NA NKWUP BTA, Nweta enyemaka ahụike.
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, nọrọ n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ, ụkwara, na nsogbu iku ume, chọọ ndụmọdụ gbasara ahụike ma kpọọ dọkịta gị tupu ị gawa. Soro ntuziaka nke Ministry of Health. n'ihi na; Ndị ọchịchị obodo na nke obodo ga-enwe ozi kachasị ọhụrụ gbasara ọnọdụ dị na mpaghara gị. Aheadkpọọ n’ihu ga - ahụ na onye na - ahụ maka ahụike gị ga - eduzi gị ozugbo na onye na - elekọta ahụike. Nke a ga - echebe gị ma nyere aka gbochie mgbasa nke nje na ọrịa ndị ọzọ.
Kpachara anya ma soro nnabata ndị mmadụ nyere gị
Mara ihe ọhụrụ na COVID-19. Soro ndụmọdụ sitere na ọkachamara ahụike gị ma ọ bụ ikike nlekọta ahụike mba na nke obodo gbasara otu ị ga-esi chebe onwe gị na ndị ọzọ na COVID-19. n'ihi na; Ndị ọchịchị obodo na nke ime obodo ga-enwerịrị ihe ọmụma kachasị ọhụrụ banyere ma COVID-19 agbasawo na mpaghara gị. Emebere ha ka ha nye ndụmọdụ gbasara ihe ndị bi n’ógbè gị ga-eme iji chebe onwe ha.
UMUPUTA MAKA NA-EBUTE EGO NA-EGO VITIRI-19 N’UGBU EGO 14 UMU IGBU
Soro ntuziaka ndị a edepụtara. (Ihe nchedo maka onye ọ bụla) Ọ bụrụ na ịmalite ịgwọ ọrịa, nọrọ n'ụlọ ruo mgbe ị ga-agbake n'ụzọ zuru oke, ọbụlagodi mgbaàmà dị nwayọ dịka isi ọwụwa na imi dị nro. N'ihi na izere ịkpọtụrụ ndị ọzọ na ịgaghị ụlọ ọgwụ, ọ ga - enyere ụlọ ọrụ ndị a aka ịrụ ọrụ nke ọma, yana chebe gị na ndị ọzọ enwere ike na COVID-19 na nje ndị ọzọ enwere ike.
Ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ, ụkwara, na nsogbu iku ume, chọọ nlekọta ahụike ozugbo, ebe enwere ike ibute ọrịa okuku ume ma ọ bụ ọnọdụ ọjọọ ọzọ. Kpọọ ndị njem gị ma gwa ha ka ha kpọtụrụ ndị njem. Kpọọ tupu gị agawa dọkịta gị, ịkpọ tupu oge eruo ga-eduga gị na nlekọta ahụike dị mma. Nke a ga - enyere aka igbochi mgbasa ọrịa COVID-19 na nje ndị ọzọ.
Pịa ebe a ka ibudata pdf Pịa.
Mmetụta Covid-19 na Ọnọdụ akụ na ụba ga-adịgide na opekata mpe otu afọ
EGİAD na-enyocha ihe ngosipụta akụ na ụba nwere ike nke Covid-19 na Webinar
Ngwaọrụ njem ọha na-akwụghị ụgwọ maka Ahụike Ahụike na Bursa
Balance nke corona virus na Turkey: Dead Register Number 9!
Isi Ihe ozo di nkpa na GAZİRAY Emechaala
Ilgbọ okporo ígwè Baltimore Ohio
Taa na History: 16 May 1991 TCDD Ankara Open Air Steam
Kedụ ka Ọrụ Metro, Ankaray na EGO Ga-anọ na Ankara maka mmachi ụbọchị 4?
Bandırma Ferry Gaa Echi
90% nke Altınordu Intercity Bus Terminal dechara
Aka ejiri aka bulie maka forlọ Natoyolu Metro Line
Arụ Ọrụ Kayseri Na-ahụ Maka ationgbọ njem Ahụike
Ndi meriri ebe njedebe Istanbul na National Electric Train
Ọrụ Disinfection maka Taxi Azụmaahịa na Line Minibuses dị na Konya
Agaghị arụ ọrụ ikuku ikuku na ESHOT na IZULAS Bọọlụ Maka Ahụ Ike
MÜSİAD Miriputara ogwe aka ya maka oghaghari ahu
Onye mgbasa ozi nke Oke ohia biputere mgbasa ozi. A ga-ewe ndị ọrụ gọọmentị 2020 n'aka ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nkwupụta akpọrọ "Ministry of Agriculture and akai, General Directorate of akai, ọkwa nnabata 122" [More ...]
Armored Amphibious Iwakpo Ube a Ga-abanye na agha nke Navy Turkish Na 2022
“Ego M adịghị mma” na chazụ na Salegbọala
Actorylọ ọrụ nchekwa ọkụ eletrik nke ụlọ na nke dị na mba dị na ntọala
Ekwuputere Ndepụta Ọdụ Nweta Ọhụụ Ankara
Ndi Metrobus, Bus, Ferry na Metro Work na Istanbul dị n'ime Mmebi Iwu?
Kedu ihe bụ ERTMS / ETCS? - Railway Technologies